तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
दुख, पीडा, तनाव, उदासी मानसिक विकार हुन्, जसले हामीले कहिल्यै राम्रो गर्दैन । यस्ता कुराले मानसिक रुपमा हामीलाई कमजोर बनाउँछ । जब हामी मानसिक रुपमै कमजोर हुन्छौं, शारीरिक रुपमा पनि हामी तन्दुरुस्त र सक्षम हुन सक्दैनौ ।
हामी सबैले सामान्य जिन्दगीलाई किन यति धेरै जटिल किन बनाइरहेका छौं भनेर एकपटक शान्त दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मनमा शान्ती पाउन सबैभन्दा सजिलो छ, यसको लागि नकरात्मक विचारबाट टाढा रहेमा मात्रै पुग्छ ।
त्यसैले अरुको कारण तनावग्रस्त र क्रोधित हुन हुँदैन भन्ने कुरा सबैले सम्झिनुपर्छ । हामीले अरुबाट धेरै आशा पनि राख्नुुहुन्न । किनभने कसैले हाम्रो अपेक्षाअनुसार व्यवहार गरेन भने बिनाकारण हाम्रो मनमा रिस र तनाव पैदा हुन्छ ।
यस अभ्यासले तपाईको मनमा नयाँ उत्साहको सञ्चार हुन्छ र मु्स्किल हालतमा पनि सँधै खुसी रहन सक्नुहुन्छ ।Source
Tags: तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
Previous जाडो मौसममा व्यायाम : कति गर्ने, कहाँ गर्ने ?
Next आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ्य जीवनशैलीको अभ्यास